Izinzuzo emvelweni ezilethwa yiziphepho | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba sizoba ngabantu, nasemphakathini wethu, kufanele kuthiwe asikwazi ukuthola izinzuzo eziningi esiphepho. Ngaphezu kwalokho, wudaba olubucayi kakhulu, ikakhulukazi kulabo abathole imiphumela. Kepha, ngokugxila kwiplanethi yethu, ngokubuka kwesimo sezulu, okuyisihloko esibhekene naso lapha, akukubi kangako.
Kungenzeka ukuthi i-priori, siqhubeke nokuhlonza isiphepho esinokubhujiswa. Izihlahla eziwile, amabhishi abhujisiwe, izilwane eziye zathola imiphumela, njll. Ukungasho ukuthi umphakathi ukhathazeke ngani. Ukulahleka kwabantu, izakhiwo ezibhujisiwe, imililo ngenxa kagesi, izinhlupho ... ngokubuka kwesimo sezulu, kulungile. Ungaqagela ukuthi kungani ngaphambi kokufunda kuqhubeke?
1 Umthethonqubo wokushisa
3 Izinzuzo eziningi
Izinyathelo zeziphepho zinikela ekupholiseni umhlaba. Isici esiyinhloko kufanele sicatshangelwe. Ukufudumala kwamanzi olwandle, izivunguvungu ziba namandla kakhulu. Isiphepho esikhulu i-Irma kube ukubonakaliswa kwawo wonke amazinga okushisa aphezulu esihlangabezana nawo ezikhathini zamuva. Ngokulandelayo, izivunguvungu, ngobukhulu bazo nobukhulu bazo, zivame ukupholisa, hhayi kuphela esikalini sendawo, kodwa lokhu kuhumushela embulungeni yonke. Kungenye yezindlela iplanethi yethu enayo njengendlela yokuzilawula ngokwakho ukushisa kwayo.
Yize ukwakheka kweziphepho kuyinto esacwaningwa, kunezinto ezimbalwa ezaziwayo ngazo. Ukucabangela ukuthi izinga lokushisa lamanzi linomthelela, liphinde lihumushe nomoya oshisayo. Ukuphakama kwezinga lokushisa, kuba nomoya omncane kakhulu, okwenza ukuthi ukhuphuke. Ukwenza kanjalo kwehlisa ingcindezi, kubangela ukungazinzi, kubangela ukuqala, isiphepho kuleli cala. Ngokuphambene nalokho, kungaba yi-anticyclone. Umoya obandayo nofudumele awuxubeki, yingakho uphehla le misinga, futhi ngenxa yalokho lezi zinto zenzeka kakhulu enkabazwe. Ngomoya ofudumele wakhe ehlangana namakhaza aqhamuka ezigxotsheni.
Ama-colares angabahlomuli abakhulu beziphepho. Ngaphandle kokuba uhlobo lwasolwandle, Amakhorali avumela izigidi zezinhlobo ukuthi zisinde. Zibuye zenze i-syciosis nezinye izinhlobo. Isibonelo, esinye sazo yi-algae, "usizo lwayo" olwazalwa eminyakeni eyizigidi ezingama-210 edlule.
Izinkinga ezivela ngamakhorali ahambisana nokuguquka kwesimo sezulu, njengokuncibilika kwezigxobo, amazinga okushisa anyukayo, njll., Ukuthi zibeka engcupheni impilo yazo. Ngamazinga okushisa aphezulu, amakhorali avame ukucindezelwa, okungukuthi, aphenduka abe mhlophe ngombala. Lokhu kuguquka kombala kwenzeka ngoba izimo ezidingekayo zokugcina i-zooxanthealle azinakekelwa, futhi ama-coral ayawaxosha. I-Zooxanthealle iyi-protozoan ye-symbiotic.
Ekugcineni, uma izimo ziqhubeka nokuba zimbi, ungafinyelela eqophelweni le- ukufa kwamakhorali. Uma lokho kwenzeka, okwenzekayo empeleni yilokho i-ecosystem enkulu iyanyamalala, futhi ngeke iphinde itholakale. Kungakho, ukudlula kwesiphepho, kwehlisa amazinga okushisa, bese kulawula imibandela yokuthi baphile. Yile ndlela isiphepho esidlala ngayo indima "yokuvuselela" ngaphansi kwamanzi, sisiza ekulondolozeni zonke lezo zinhlobonhlobo ezinkulu ezilinganisweni.
Hhayi kuphela lezo ezibalulwe ngenhla, iziphepho nazo ukufaka isandla ekuvuseleleni amanzi angaphansi komhlaba. Futhi izindawo lapho bekunamanzi amile futhi mhlawumbe bekukhona abakhiqizi bezinambuzane ziyahlanzwa.
Esinye isici esilethwa imimoya enamandla ukusiphula izihlahla. Ababuthakathaka bavame ukuphuka, ngaleyo ndlela bathuthukise amahlathi angavuselelwa ngokugcina izihlahla eziqine kakhulu. Njengamanzi amile, futhi kusebenza njengokulawula ukugwema ukugcwala kwezinhlobo ezithile zezinambuzane.
Kuyafuna ukwazi ukuthi kwesinye isikhathi, okubonakala kungalawulwa emvelweni, kunezizathu zokuba khona kwayo futhi kushiya ngemuva ifa lokulinganisela. Ukube bekungezona iziphepho, into ebingenzeka enkabazwe ukuthi ibizoshisa iphuzu eliphezulu kakhulu. Lapho ekugcineni sasizothola i- isiphepho esikhulu, i-hypercan, esikhulume ngayo muva nje.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Izinzuzo emvelweni ezilethwa yiziphepho
ISiphepho u-Irma sashintsha umbala weVirgin Islands